Kedu mpaghara mpaghara ike 7? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Mpaghara igwe ịgba gburugburu - azịza bara uru
Mpaghara igwe ịgba gburugburu - azịza bara uru
Kedu mpaghara mpaghara ike 7?
Ihe7 Mpaghara ikedị ka Coggan si kwuo
Ọkwa ọ bụla na-anọchi anya otu ọrụ ọzụzụ: Mgbake na-arụsi ọrụ ike, ntachi obi, oge, ọnụ ụzọ, Vo2Max, ikike Anaerobic na NeuromuscularIke.
Ma eleghị anya, ị zụtala mita ike ma ọ bụ nwee ohere ịnweta otu ma chọọ ịma otu ị ga-esi rite uru na ya - yabụ ka anyị ruo ndụmọdụ anyị kachasị elu maka iji igwe elekere. (egwu na-ada ụda) - Ihe mbụ, mgbe ị tinyechara mita ike gị na igwe kwụ otu ebe, ịkwesịrị ịhazi ya iji jide n'aka na data ị chịkọtara dị ka o kwere mee. Enwere ike ịchọta ọrụ mmezi n'okpuru ntọala menu nke isi gị site na ngwa na ekwentị gị.
Akwọọrọ m ụgbọala maka 10 ma ọ bụ 15 nkeji maka igwe ike iji gbanwee ọnọdụ ihu igwe na mgbe ahụ m gafere n'akụkụ okporo ụzọ wee mezie - Aka nri, Chris, ka ị na-eme nke a, m ga-agwa gị ntakịrị. Ihu ọma, nke a dị ka ọrụ ahụ na kichin gị. Ess nnoo efu ha n'ihu na-agbakwunye ọ bụla mmezi ibu na ụwa, ị na-eme na n'ihu ọ bụla ọzụzụ ride.
Ma ike mita enwetala nke ọma n'ime afọ 10-15 gara aga na nke a enweghị isi ma ọ bụrụ na ị na-atụ uche ya kwa oge, mgbe ahụ, ezigbo nwunye ị dịla njikere? Enwere m awa atọ. - Bịa, rapara na ya! (Upbeat music) Mpaghara. E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji jiri ike gbakọọ mpaghara ọzụzụ gị, yana enwekwara ọtụtụ mkparịta ụka gbasara mpaghara ole ị ga-eji.
Mana nke kachasị bụ nke Dr. Andy Coggan mepụtara usoro a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmpụta ọzụzụ niile ma ọ bụ mmemme na ndabara na-eji ọdịiche dị ukwuu nke nchịkọta mpaghara ha dabere na pasent nke arụmọrụ arụmọrụ gị.
A na-edebiri arụmọrụ arụmọrụ dị ka FTP ma ọ bụrụ na ị maghị ihe kachasị arụmọrụ ị nwere ike ịkwagide maka oge 60. A na-atụle mpaghara ndị a dị ka ụkpụrụ ọla edo na ọzụzụ - anyị na-amalite na ala, mpaghara 1 ma ọ bụ mgbake na-arụ ọrụ. Nke a mere kpam kpam n'okpuru 55% nke FTP gị.
Nke a bụ mpaghara ị ga - eji maka akụkụ niile dị mfe nke oge etiti gị. Ma maka nlezianya maka ntụrụndụ ndị ahụ na-adịgide n'okpuru otu awa. Otu ihe a gwara m n’otu oge na ọtụtụ ndị egwuregwu na-emejọ ya bụkwa ihe m gbara àmà mgbe emechara mgbe m bidoro inye ọzụzụ.
Na tiori, ị nwere ike ịnya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ebighi ebi na Mpaghara 1, mana echeghị m na ịchọrọ nke ahụ - nke kwesịrị ịdị ugbu a gburugburu 65 ruo 75% nke FTP gị, nke a ga-emeju ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọzụzụ gị dị ka onye egwuregwu ntachi obi. Nke a ga-akwado ọrụ mitochondrial gị na uto gị. Ọ ga-enyekwara aka mee ka abụba gị ghọọ ume.
You nwere ike ijigide mgbali ahụ ruo ọtụtụ awa - Mpaghara 3, nke a makwaara dị ka ijeụkwụ. Nke a na - eme na 76 rue 90% nke FTP gị, ọ bụkwa ụdị mpaghara ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu a zụrụ nke ọma, ị nwere ike ijide elekere atọ ma ọ bụ asatọ. Ọ bụghị mpaghara dị mma, mana n'otu oge ahụ ọ bụghị nke kachasị.
Ọ bụ ụdị mpaghara ị nwere ike ịnya n'ọtụtụ ọtụtụ na-enweghị ọzụzụ ahaziri. Ọ bụ ụdị nke a nwụrụ anwụ mpaghara. Ọ dị mma maka mgbatị ụfọdụ.
Ma ọ bụghị ụdị ebe ịchọrọ ịkwọ ụgbọala nke ukwuu. - Ọ dị mma, ugbu a anyị nọ na mbọ siri ike. Nke a kwesịrị ịdị nso na 95-105% nke FTP gị, ma ị ga-enwe ike ịchekwa nke a ihe dị ka otu elekere.
Mana ọ bụrụ na ịchọrọ iwulite ya, ọ bara uru oge nkeji ga-adị ihe dịka nkeji iri na atọ na oge kachasị arụ ọrụ. bụ 30 + nkeji. Ọ dịghị mfe, mana ị nwere ike ịgbalịsie ike na mbọ ahụ, ọsọ ọsọ ga - agba ịnyịnya igwe.
Itoolu! Oh njikere! - VO2 Max, nke a makwaara dị ka Mpaghara 5. A na-eme mgbalị ndị a na 106-120% FTP ma ha siri ike. Chọrọ ịrụ ọrụ ndị a naanị mgbe obi dị gị ụtọ ka ha na-etinye ihe dị elu n'ahụ gị.
Ha bụ ụdị ọrụ ikekwe nke nwere ike ịdị mma na nkeji atọ ma ọ bụ anọ mbụ mgbe emechara na ala mpaghara ahụ. Ma ozugbo ị gafere nkeji anọ ahụ, ị ​​ga-amalite n’ezie iwe. Y’oburu n’eme etiti oge na mpaghara a, ichoro ime maka oru aka 25 nkeji. - Ọ dị mma, ị ga-akpọ anyị asị maka ya.
Na-achọ ihe dịka 121 ruo 150% nke FTP gị, yana mbọ na - ewe site na sekọnd 30 ruo nkeji abụọ. Ekwesịrị m itinye ugegbe m maka oge a. Ọ ga-abụ ọrụ siri ike.
Atọ abụọ na otu! Mgbalị a dị egwu! Igbapu ahu gi, ma mgbali a di mkpụmkpụ ma dịkwa nkọ ma na-erute ebe ahụ. Chei! Chei! - N’ikpeazụ anyị nwere Mpaghara 7, Ike Neuromuscular, a na-akpọkwa ịgba ọsọ. Mgbalị a bụ ịrụ ọrụ zuru oke ma ọ na-achọ ọ bụla akwara dị gị n’ahụ.
Enweghị ebumnuche watt maka nke a dịka onye ọ bụla nwere ike neuromuscular dị iche. Na ha abụghị pasent FTP ma ọlị. Eleghị anya naanị ịchọrọ ịme otu ma ọ bụ abụọ nnọkọ n'izu ma ọ bụ karịa n'ihi mmebi ahụ.
Họrọ otu ihe ịrịba ama n'ebe dị anya ma gbachaala maka ya. Nkọwa nke mpaghara kwesịrị inye gị echiche nke otu ha ga-esi daba na mmemme mmega ahụ gị. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, a ngwa nchịkọta.
Ntachi obi bụ ihe ndabere nke usoro ihe omume gị kwa izu. Mpaghara 4 bụ ihe na-elekwasị anya maka uru nke ikuku na ọ bụ mpaghara dị ukwuu maka ịzụ ikike ị nwere ịga ngwa ngwa. Mpaghara 5 bụ oche dara ogbenye iji meziwanye nkà gị na nrịgo dị mkpụmkpụ.
Mpaghara 6, anaerobic, bụ oge elekwasị anya na ikike gị ilekwasị anya, ọgụ ma ọ bụ ịwụ elu n'oge ị na-agba ịnyịnya, na ịgba ọsọ iji rute kafe ahụ na mbụ, ihe kachasị mkpa bụ ịgbalịsi ike na ị gaghị etinye gị PB mgbe niile. Ya mere, anwala ọbụna inwe nkụda mmụọ. Ọ na-ewe ntakịrị iwe.
Ugbu a bụ ohere ikwu maka ubi. Mba, ọbụghị mpaghara ndị a, mpaghara data. Ọ bụrụ na ị bụ ntakịrị ọnụọgụgụ, dịka mụ onwe m? , mgbe ahụ data data gị bụ ohere izizi ị lere anya na ozi dị ịtụnanya na mita ike gị.
Ma anyị nwere ndụmọdụ ole na ole iji nyere gị aka inweta ọtụtụ n'ime ya, oge m na-eche maka apata ụkwụ, oge m, oge m ka m wee mara ogologo oge na njedebe nke oge ahụ, oge m gafere nke oge ahụ, obi ọnụego, Top ọsọ n'ihi na m hụrụ n'anya na-aga ngwa ngwa, nkezi obi ọsọ, dị nnọọ ụdị nke ịmata. Ọsọ ọsọ ka m wee mara ma m ga - enweta ikuku ma ọ bụ na ọ bụghị. Ogwe aka m n'ihi na nke ahụ dị mkpa maka ụfọdụ nnọkọ.
Ma enwere m oke ọsọ ọsọ. Na peeji na-esonụ, enwere m okpomọkụ, elu, ihe yiri nke ahụ. Na nke ọzọ enwere m peeji igodo nke na-egosi m anya m, mgbe ahụ, mgbe m ji ụzọ, tel Amaara m etu esi aga na ntụgharị nke ọzọ yana ike m Nke abụọ, ike 30 sekọnd ike, ike otu nkeji, kachasị nkeji ise , max 20 nkeji arụmọrụ, n'ihi na m bụ onye zuru nerd mgbe ọ na-abịa ihe dị ka.
Onwe m, m na-achọkarị ide ihe ngebichi m otu n’agbụrụ na omume. N'ihi na ọ na-amasị m ile otu ihuenyo n'ihu m. Mana amaara m ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na-agbanwe ya naanị oge na ọsọ ma ọ bụ ogologo ma gbalịa ileghara ọnụ ọgụgụ arụmọrụ anya.
A sị ka e kwuwe, n'ịgba ọsọ anyị anaghị elekwasị anya na ọnụ ọgụgụ arụmọrụ, anyị na-anakọta data - nke ahụ ziri ezi, ihe edeturu na ọnụ ọgụgụ arụmọrụ. Ọ bụrụ na ị dị ka anyị ma na-anya ụgbọ ala n'ime ụlọ na n'èzí enwere nghọtahie ruru 15% na ọnụọgụ gị, dịka ọmụmaatụ, anyị na-akwọ ụgbọala 350 watts siri ike. Ma m na-ekwu, lee anya anyị, m na-ekwu, ọ na-amụmụ ọnụ ọchị! - Ha! - A Mgbe ahụ ị ga-ahụ Chris, onye na-eme ka otu wattage ahụ dịrị. - Nke ahụ bụ ụbọchị kachasị njọ nye m, James. - Oo, Ee.
Ha mara mma nke ukwuu - ị nwere ike ịchọpụta nghọtahie a n'onwe gị, mana buru n'uche na ọ bụ ihe nwere ike ime mgbe ị na-akwọ ụgbọala n'ime ụlọ. Na mgbe anyị na-ekwu maka ọnụọgụ, ọ na-adị mma mgbe niile iji onwe gị atụnyere ndị ọzọ, mana biko cheta na ọnụọgụ gị metụtara gị. Na n'ihi na ị mepụtara otu ego apụtaghị na ọ metụtara ihe onye nọ gị n'akụkụ ma ọ bụ onye nọ na njedebe otu a mere ka m jụọ onwe gị ihe kpatara ị na-eji nnukwu ike karịa m.
Ọ dị m mma karịa, m na-ekwukwaghị nke ahụ! Ha! - Echere m na ị ga - ahụ James - Aka nri, achọrọ m inye gị ndụmọdụ ikpeazụ. Inwe ọnụọgụ dị mma, mana otu ọ dị gị ka ọ bụ otu n'ime ihe ngosipụta kachasị nke ịrụ ọrụ - ee, yabụ dee otu ị siri hụ mmemme ahụ. Iji nweta nghọta ka mma banyere arụmọrụ gị, jiri ngwá ọrụ ọhụrụ a mepụta mmemme mmega ọhụrụ.
Kwesighi ichegbu onwe gị, mana enwere ọtụtụ ihe ị ga - amụta site na idobe akwụkwọ ọzụzụ dị mma.- Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na edemede a, echefula inye ya nnukwu mkpịsị aka gị. - Na maka isiokwu ndị ọzọ ọzụzụ, Pịa ebe a n'okpuru.- Correct Buddy, anyị kwesịrị ịga nọrọ ọdụ na otu mmiri. Anyị nwere mpaghara 6 ime, nri? - Echere m na ọzụzụ agwụla. - Anyị agaba!
Kedu ka m ga-esi mara mpaghara ịgba ịnyịnya ígwè m?
Isetịpụrụ gị ọzụzụMpagharadabere na ịchọta oke obi obi gị bụ na, site na nke ahụ, na-arụ ọrụ ahụMpaghara. Popularzọ ama ama maka ịchọpụta oke obi gị bụ iji akara nha dị mfe, dịka 214 mwepu (0.8 x afọ) maka ụmụ nwoke ma ọ bụ 209 mwepu (0.9 x afọ) maka ụmụ nwanyị, na mbụ 220 mwepu afọ.
Ike na FTP bụ nnukwu okwu ebe a na TCM, mana ọ dị oke ọnụ. Nwere ike iji ihe karịrị puku puku atọ na mita ike ọhụrụ. N'isiokwu a, aga m egosi gị otu esi azụ FTP gị mgbe ịnweghị mita ike ma ọ naghị ata ahụhụ ọ bụla dị mfe iji gbakọọ FTP gị mgbe ịnwere mita ike, mana enwere ụfọdụ Atụmatụ na usoro iji nyere gị aka ikpebi ha, ya mere, lee ha.
Nke mbụ, anyị kwesịrị ịghọta ihe ike ụzọ mbata ọrụ bụ, tinye ya n'ụzọ ọzọ, nke a bụ ikike kachasị elu kachasị elu ị nwere ike ijide otu awa. A tụrụ ike a na watts. Nwere ike iji nsonaazụ ahụ chọpụta mpaghara ọzụzụ gị mgbe ọ bịara ịzụ FTP gị na mita ike.
Can nwere ike ime nke a na onye na-enye ọzụzụ n'okporo ámá, mana ọ bụrụ na ịhọrọ ịme ya n'okporo ámá, ị kwesịrị ịnwa idobe ọnọdụ ndị a otu, yabụ mee ya n'otu ụzọ egwu egwu oge ọzọ ị kpebiri. ebe ịchọrọ iji nyocha FTP gị hụ na ị ga-ekpo ọkụ nke ọma tupu ịmalite ule ahụ mgbe ị nwesịrị ịnyịnya dị ike dịka ị nwere ike maka nkeji 20 ị nwere ike ikpebi ike ike gị na-arụ n'oge nkeji 20 mana data na igwe elekere ga-enyocha Enwere ike ike gị, mụbaa ise na ise iji chọpụta FTPEnwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi gbakọọ FTP gị n'efu nke mbụ anyị ga-ekwu maka ya bụ Swiftso mgbe ị gachara ikpe ikpe n'efu 30. Nke a na - enye gị ohere iji usoro nyocha nke ịntanetị ihe niile ịchọrọ bụ onye na - azụ ọzụzụ, ọ dịghị mkpa ịnwe mita ike, naanị ihe mmetụta nzuzo na ihe ọsọ ọsọ zuru ezu iji rụọ ọrụ na clip ike gị na FTP ọzọ ị nwere ike iji FTP gị na Gbakọọ. Strava. Need chọrọ akaụntụ ma ị ga-akwụ ụgwọ maka Strava Summit nke bụ £ 18.99 kwa afọ iji kwụọ ụgwọ maka Strava, mana ịchọrọ n'ezie ịrụ ọrụ FTP gị, gịnị kpatara na ị gaghị ede naanị maka mbọ kachasị na-aga n'ihu nke 60 nkeji na mgbe ahụ tinye ya na akaụntụ Strava na - akwụghị ụgwọ na nke ahụ na - enye gị atụmatụ nke ike watts nke ike ị megoro n'oge ahụ ọtụtụ gyms nwere ego dị ka igwe kwụ otu ebe nwere ike.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ndị otu mgbatị ahụ ịgaghị gaa mgbatị ahụ wee nwaa FTP ule ebe ahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị otu mgbatị ahụ, nke ị nwere ike ịchọta mgbe ahụ bikestudios nwere ike ịkwụ obere ego wee nweta FTP ebe ahụ Mee ule. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwere ndị enyi nwere onye nkuzi nwere ikike, jụọ ha obiọma ma ọ bụrụ na ị nwere ike ibiri ya na ozi ziri ezi ọ ga-ebu amụma banyere sistemụ sistemụ a bụ injin gị nke ndị isi atọ mgbe ị na-agba ịnyịnya na Eletrik ọnọde ike ndọda na-agba ọsọ track na aerodynamic ikpuru. Ga-ede rịgoro, steepụ ahụ na ikuku ka mma na-emetụta gị, nke ka mma na etu ọrụ ahụ ga-esi zie ezi? mana ikwesiri inwe ezigbo ozi ka odi ka ihe di ka onye inyinya igwe eji ebu igwe.
Ogologo ala, ikuku dị elu na ọrụ oge, mana ị ga-enwerịrị ike inweta ọtụtụ ozi a na kọmputa igwe kwụ otu ebe gị mana buru n'uche na nke a bụ atụmatụ na ọ ga-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ị banye nkọwa niile n'ụzọ ziri ezi na ọnwa mana ọ bụrụ dị n'elu ya na-eche maka ịzụta mita ike ma chọọ ịnwale otu tupu ịzụrụ otu nke a bụ nnukwu nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ego kachasị na gịnị kpatara ị ga-eji nyocha FTP kwa ụbọchị ọ bụla n'ọnwa ahụ bụrụ nnukwu ihe ọ ,ụ, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na-arụ ọrụ na FTP anyị, gịnị kpatara na ị gaghị anwa ịpụ na ọnụọgụ obi ma gbakọọ ọnụ ụzọ mbata obi gị, ihe niile ị ga - eme bụ igwe kwụ otu ebe na AHArate nyochaa dịka FTP -Test Kwesịrị, ọ dị mkpa ime nyocha zuru ezu nke 20 nkeji oge na ma ọ bụ na onye na-enye ọzụzụ ogologo oge na-agbago anyị na-enweghị nkwụsị ma ọ bụ nkuku, ọ dị mma ịmara na ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu anaghị achọpụta mgbanwe ọ bụla na ọnụ ụzọ ha na-arụ ọrụ oge, yabụ ọ bụrụ Achọrọ iji ule a soro ndozi ị ga - achọ idekọ ọnụọgụ ọzọ yana dịka ọmụmaatụ ị nwere ike soro ọsọ ọsọ gị ma ọ bụ ogologo njem njem na nkeji 20 ka ị nwee ike iji nsonaazụ gị tụnyere oge ọzọ ị ga-emeghachi ule ahụ, enwere olile anya na nke a ga - enyere gị aka na ngụkọta oge ma ọ bụrụ na ịnweghị mita ike na igwe kwụ otu ebe gị ma ọ bụrụ na ị nwere otu vidiyo, biko nye ya nnukwu mkpịsị aka aka, yabụ n'isiokwu a, m ga-eso gị kerịta ụfọdụ ndụmọdụ na usoro iji gbakọọ FTP ma ọ bụrụ na ị nọghị n’obodo maka igwe eletrik ma ọ bụ na ịchọrọ ịhapụ ọgaranya na ya, mana Ọ gaghị adị
Gịnị bụ ịgba ịnyịnya ọzụzụ ọzụzụ nke abụọ?
Ọzụzụ mpaghara 2bụ ntachi obi ụbọchị gị niile: 56-75% nke FTP gị ma baara gị uru nke ukwuuọzụzụ. Inwe ike ịgbaabụọ-6 awa n'imeMpaghara 2bụ nzọụkwụ mbụ na ndị na-agba ọsọọzụzụmaka inwe ike ịsọ mpi agbụrụ ma ọ bụ ihe omume ndị yiri oge.Apr 2 2021
Woo, ụtụtụ ọma, Trainiacs. Ọ bụ mwepu 19 degrees Celsius, mwepu Fahrenheit atọ. Ma taa ọ kachasị mma maka (imeghe ọnụ ụzọ ụgbọ ala) n'ihi na m ka na-eyi naanị akwa nhicha na spidomita.
Nke ahụ nwere ike ịdị ka ihe nzuzu, mana m mere ezigbo mmiri na-egwu mmiri. Ugbu a soro nke a site na ekpughere ntakịrị na oyi, ntakịrị oyi na oyi iji tufuo abụba ụfọdụ. Ihe m na-emere unu, ha nwere ike ọ gaghị ama ihe, ha nwere ike ịdị ka ihe ọchị, mana enwetara m ụfọdụ nsonaazụ sitere na ihe m bidoro n'afọ gara aga nke ọtụtụ n'ime unu na-eche maka ya, jiri obere mmega ahụ.
Anyị nwetara nsonaazụ na-atọ ụtọ nke na-egosi gị ihe ị ga - eme nke ọma na mgbatị obi dị ala a. M kwesịrị ịla n'ụlọ. Ọ dị ihe dị ka nkeji ise.
Enwere m ike, apụrụ m. (Energetic electronic music) (sighs) Ee. Nke ahụ bụ oyi, dị ezigbo oyi.
M kwara ụta ozugbo ozugbo m banyere n'ihu ebe a na-adọba ụgbọala. Ma m mere ya. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ntakịrị ntakịrị gbasara mmasị na ihe kpatara anyị ji eme ya, yana ụfọdụ ihe efu gbasara nke ahụ, aga m ejikọ ya na ngwụcha nke edemede ahụ.
Ọ dị mma, yabụ nnukwu, akụkụ buru ibu nke ọzụzụ sitere n'aka Team Trainiacha. Ya mere nke ahụ pụtara na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọzụzụ gị bụ na ị na-eme ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụghị nke siri ike, ma ọ bụ na ike siri ike, nke siri ike. Nke a bụ iji wuo igwe gị, ike nke obi gị na ngụgụ gị, usoro obi gị, na-ere ọtụtụ abụba ka ị na-eme mgbatị ahụ.
Nke a kwesiri ime ka ike, ọsọsọ, ka mma. Yabụ ị na-ewulite nnukwu mgbatị ahụ ma mee onwe gị ngwa ngwa. Ihe a juru ọtụtụ mmadụ anya n'ihi na mgbe anyị na-agbakọ mpaghara ọnụego obi anyị, ọ na-eju ndị mmadụ anya na ihe ọkụ ọkụ bụ, etu o si dị mfe iji ọrụ a dị mfe.
Azịza m na-enye bụ nke a bụ ihe na-egosi oke ike ị nwere n'ihi na ọ bụrụ na ị nwere ike ịme mgbatị niile ị rụgoro ruo ebe a na njedebe gị, mpaghara gị dị ala otu na abụọ, ọ bụrụ na-amụtachaghị nke ọma, chee etu ị ga - esi dị mma karịa mgbe a zụrụ gị n ’ọkụ a. Echere m na ndị mmadụ na-achọghị ịrụ ọrụ ahụ mana ha ahụbeghị nsonaazụ ya, ha nwere ụdị ntụkwasị obi na ọ ga-arụ ọrụ n'ikpeazụ. Enwere m nsonaazụ iji gosi gị.
Ọ bụghị aghụghọ, Grace. Bịanụ. (Aka aka) Gracie na-ele m anya, anyị alaghachila n'ime oghere mgbu.
Ihe niile dịkwa mma ọzọ. Ihe anyị nwere ebe a bụ egwuregwu abụọ dị iche iche. Oge mgbatị mbụ m ga - egosi gị bụ ihe dị ka elekere elekere atọ nke m mere maka izu ise na ọkara na mpụga Half Ironman World Championship afọ gara aga.
Na mbido afọ gara aga, ọ bụghị naanị na emerela m mpaghara izugbe otu na mkpụrụ obi abụọ na-achịkwa ọrụ mgbatị ụlọ, mana ọ dị m ka ọ dabara adaba. Na njedebe, enwetara m ihe kachasị mma na Half Ironman Worlds. Oge mgbatị ahụ m ga - egosi gị bụ mgbatị ahụ m mere ụnyaahụ, ihe dị ka izu ise tupu Ọkara Ironman Puerto Rico Otu n'ime isi dị iche bụ na n'ime ọnwa atọ gara aga enwere m ọnụ ọgụgụ buru ibu nke obi obi na-achịkwa, dị ala , naanị mmega ahụ ike zuru oke, mpaghara otu na ụdị mgbatị abụọ.
Ma enwere nnukwu ọdịiche na arụmọrụ gosipụtara gị mgbatị nke afọ gara aga. Ma ọ bụrụ na ị mbugharị na peeji ebe a, ị nwere ike ịhụ ụfọdụ stats. Ọ bụ kilomita 106, awa atọ, nkeji asatọ, sekọnd 42, yana akara nrụgide ọzụzụ nke 138, rụzuru arụmọrụ 187.
Gbada ebe a. Nkezi ike 174, nkezi obi ọnụego bụ 130. Ọ dị mma, naanị cheta na nkezi ike bụ 174 na nkezi obi ọnụego bụ 130.
Ugbu a anyị abịala ọzụzụ nke ụnyaahụ ebe a. Oge awa atọ, nkeji atọ, sekọnd 28, kilomita 104. Ọzụzụ nrụgide nke 156.
N'elu elu, nkuzi yiri nke a. Ọzụzụ nrụgide dị elu, yabụ na ọ kwesịrị ịka njọ karịa m. Mana ka anyị buputa ebe a.
Nkezi ike 172, ya mere, ike m nkezi bụ asatọ watts elu. Ike nkịtị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20 watts elu. Ma obi m dị na 118.12 na-eti kwa minit obere na nkezi.
Amaghị m n'ezie na site na njedebe nke mgbatị ahụ, mana mgbatị nke ụnyaahụ nwere nkwughachi isii nke 15 nkeji na ma ọ bụ karịa ọsọ ọsọ ahụ wee nkeji ise nkeji n'etiti. Mgbe m rutere n'ikpeazụ abụọ m chere na ị mara ihe nke a bụ n'ezie na ọ dị m mfe. Anọgidere m na-ele obi m anya, na-atụ anya na obi m ga-arị elu, ma hụ nnukwu oke na nnuku n'ihi na echetara m mgbatị ndị a bụ afọ gara aga.
N'okwu a, m mere nke ọma karịa na ọ were m site na usoro obi, ahụ m adịchaghị enwe nrụgide. Ọ bụrụ na ị maara ọtụtụ ihe gbasara ọzụzụ ọzụzụ obi, ịmara na ọ na-agbanwe agbanwe ma enwere ihe ole na ole na-emetụta ya. Ọ dị mma, ka anyị leba anya n’ihe ole na ole n’ime ihe ndị a iji mee ka ha abụọ gbanwee.
Mgbatị ahụ nke afọ gara aga nwere ọ̀tụ̀tụ̀ ịdị omimi nke afọ 70. Emere m ezigbo ọrụ ike mpụta nke muscular. Mgbatị nke ụnyaahụ nwere nkezi nke 82.
Ọtụtụ mgbe, ọnụọgụ obi gị na-adịkarị elu mgbe ị nwere nnukwu amamịghe. Yabụ agbanyeghị na ọnụọgụgụ obi m dị ụnyaahụ, na nchepụta ya kwesịrị ịdị elu. Ihe ọzọ m ga-achọ bụ naanị kaadị ahụ.
Ga - ahụ n’ọzụzụ afọ gara aga n’èzí ka ọzụzụ ụnyaahụ dị na Wa. weere ọnọdụ Topia. Ọ dị mma ihe kpatara nke a ji dị mkpa n'ihi na ọ na-abụkarị mgbe ị nọ na onye na-enye ọzụzụ ọzụzụ, obi gị na-achọ ịrị elu, ihe dị ka elekere anọ ruo asatọ na nkeji oge na nkezi, n'ihi na ọkụ niile na-abanye n'ime.
Na mpụga, n'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịfefe oke oke ọkụ n'ihi na ikuku na-efega gị. Ọzọkwa, ihe abụọ ahụ, ọhụụ na n'ime, nwere ike ịpụta na ọnụọgụgụ obi m dị elu karịa ụnyaahụ karịa nke afọ gara aga. Na n’ikpeazu, nke kachasi mkpa, leba anya na onu ogugu.
Ogologo ọsọ ụnyaahụ bụ 34.2 kilomita kwa awa, ma e jiri ya tụnyere kilomita 33.7 kwa awa n'afọ gara aga.
Ọtụtụ ajụjụ m nwetara dịka m na-ekwu, nke a ọ na-arụ ọrụ n'ezie? Kedụ ka m ga - esi nwayọ nwayọ ma mee ngwa ngwa? Kedụ ka m ga - esi nwee ọganiihu mgbe m na - ebugharị kilomita asaa n ’ebe ụfọdụ mgbe enwere m mmetụta na anaghị m agagharị? Anọ m na-enwe otu ihe ahụ maka ọnwa atọ ma ọ bụ anọ gara aga, naanị ịtụkwasị sayensị, ọmụmụ ihe ahụ, ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eme egwuregwu na-eme ọtụtụ ọzụzụ na-arụ ọrụ nke ha na-ewu nnukwu mgbatị ahụ wee banye n'oge ịgba ọsọ ahụ. na Nkọwa usoro ịgba ọsọ ọsọ, enwere m olileanya na ọ ga-akwụ ụgwọ. M na-dị nnọọ na-ahụ na nanị ihe atọ ọzụzụ na iji ọduọ ojiji, M nwere ike na-a nnukwu isi nke mma na n'ezie na-amalite na-egbusi onwe m maka agbụrụ. Ike m nwere ịrụ ga-akarị nke ukwuu n'ihi na anaghị m akụpịa onwe m, m wuru nnukwu mgbatị ahụ na mpaghara ndị dị ala otu na abụọ.
Ejiri m ike dị ukwuu wulite ọtụtụ ọsọ. Ugbu a, anyị ga-abanye n'ime mpaghara nke atọ, nke bụ usoro ịgba ọsọ, ma mee ihe ole na ole, ọ bụrụ na nke ahụ bụ mmasị gị ma ịchọrọ mgbatị niile na mmemme oge nke na-arụpụta nsonaazụ ndị a, dịka m na-eme otu mgbatị ahụ dị ka Team Trainiac na-eme, ọ bụ ihe m na-eji maka ọzụzụ m, gaa teamtrainiac.com, gbalịa ikpe ikpe n'efu 14 ụbọchị.
Na-esote, ọ bụrụ na ịchọrọ mgbatị ahụ na-ebu ọnụ, gaa na ya, ọ ga-anọ ebe ahụ. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ọzụzụ ọzụzụ obi, gaa ebe ahụ.
Kedu ihe mpaghara FTP pụtara?
Mpaghara ike bụniile a kọwara dị ka pasent nke gịFTP. Ha na-enye anyị ohere ịmalite mgbatị ahụ na ọkwa ogo onye ọ bụla, na-ahụ na onye ọ bụla na-arụ ọrụ na ike kacha mma.
Ekele m unu, n’isiokwu a anyị na-ekwu maka FTP, SFTP, na TFTP. Ndi a bu ogbugba ndu eji nyefee faili n’elu netwok. Ya mere, ka anyị kwuo maka FTP na mbụ.
FTP ugbu a na-anọchi anya Njikwa Nyefee Njikwa ma bụrụ usoro iwu ọkọlọtọ ejiri nyefee faịlụ n'etiti kọmputa na sava n'elu netwọk dịka .ntanetị. Na nkenke, FTP bụ asụsụ kọmputa na-eji ebufe faịlụ n'elu netwọk TCP / IP. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ebe ọ bụla n'ụwa chọrọ ịme faịlụ ha maka ibudata ndị ọzọ, ha ga-ebugo faịlụ ha na sava FTP yana ndị ọzọ si ebe ọ bụla n'ụwa nwere ike ijikọ ha n'ụzọ dị mfe.
FTP nkesa na ibudata faịlụ site na iji FTP protocol. N'ihe atụ a, onye ahụ na-eji sava FTP raara onwe ya nye ya ịkekọrịta faịlụ ha, mana ọ bụchaghị mkpa ịtọlite ​​sava raara onwe ya nye maka sava FTP. N'ihi na ọ bụrụ n 'ịchọrọ n'ezie, ịnwere ike ịhazi kọmputa gị dị ka sava FTP.
Ọmụmaatụ, na Microsoft Windows enwere ike ịme ihe site na iji njikwa Ọrụ Ntanetị Ntanetị. E nwere ugbu a ọtụtụ ụzọ iji nyefee faịlụ site na FTP. You nwere ike iji ihe nchọgharị Internetntanetị ọkọlọtọ gị ma ọ bụ onye ahịa FTP.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị budata ụfọdụ faịlị MP3 nke mmadụ tinyere na sava FTP. Yabụ na ihe atụ a, anyị na-eji ihe nchọgharị intaneti ọkọlọtọ. Yabụ ị ga-emepe ihe nchọgharị weebụ wee pịnye na adreesị nke ihe nkesa FTP ịchọrọ ijikọ, dịka ị ga-eji weebụsaịtị nkịtị.
Ya mere adreesị weebụ nke ihe nkesa FTP a bụ FTP example.com. Yabụ ị ga-abanye adreesị a dị ka URL.
Nọmalị ma ọ bụrụ na ị na-aga ebe nrụọrụ weebụ dị mma, nganiihu ahụ ga-abụ HTTP, mana ebe anyị na-aga ebe FTP, nganiihu bụ FTP. Yabụ ugbu a, anyị ejikọtara na sava FTP. Ya mere, ebe a bụ ihe atụ nke nlele ihe nkesa FTP na ihe nchọgharị weebụ.
Site na ebe a ị nwere ike ịchọgharị folda dị iche iche dị na sava FTP dabere na ihe onye nwe ya nyere. Ma mgbe ahụ ị nwere ike ịlele ma budata ihe ịchọrọ. Yabụ ebe a bụ faịlụ MP3.
Naanị pịa faịlụ ahụ wee budata ha na kọmputa gị. Mgbe ụfọdụ sava FTP chọrọ akaụntụ na aha njirimara na paswọọdụ, na mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịbanye na-enweghị aha. Ọ dabere na ụdị nyocha nke onye nwe ihe nkesa FTP guzobere.
Zọ ọzọ iji jikọọ na sava FTP bụ iji ndị ahịa FTP. Ugbu a enwere ọtụtụ ndị ahịa FTP ị nwere ike iji, mana ikekwe onye ahịa FTP a ma ama bụ onye akpọrọ FileZilla, nke ị nwere ike ibudata n'efu. Ya mere, lee otu ihe atụ nke onye ahịa FTP.
Dịka ị pụrụ ịhụ, onye ahịa FTP na-enye njirimara ọrụ eserese yana ahụmịhe kachasị mma karịa iji ihe nchọgharị weebụ. Yabụ ebe a ị ga-abanye adreesị nke ihe nkesa FTP yana aha njirimara na paswọọdụ ma achọrọ ya na ọnụ ọgụgụ ọdụ ụgbọ mmiri nke ga-abụ ọdụ ụgbọ mmiri 21. Ma mgbe ahụ ị ga-akụ bọtịnụ 'Jikọọ' ma ugbu a anyị ejikọtara na sava FTP .
Yabụ ebe a na akụkụ aka ekpe ị nwere faịlụ na folda dị na kọmputa gị. Ma lee ebe a na pane aka nri i nwere lee faịlụ na folda ndị dị na sava FTP dịpụrụ adịpụ. Site na ebe a, ị nwere ike pịa ma ọ bụ dọrọ na dobe faịlụ dị ka faịlụ MP3 ndị a site na sava FTP wee budata ha na kọmputa gị site na ịpị ha ma ọ bụ ịdọrọ ha site na nri aka nri gaa n'akụkụ aka ekpe.
Ọ bụrụ na ị nwere ikikere kwesịrị ekwesị, ịnwekwara ike bulite faịlụ site na kọmputa gị gaa na sava FTP site na ịdọrọ ha site na aka ekpe gaa aka nri. A na-ebugo faịlụ ndị ahụ na sava FTP. Ya mere, ịnyefe faịlụ n'etiti kọmputa bụ ihe a na-ejikarị FTP eme, karịsịa mgbe ị na-ebufe faịlụ na ọnụọgụ dị ukwuu.
Ihe ọzọ FTP na-eme bụ ikwe ka ndị na-emepụta weebụsaịtị wepụta faịlụ na sava weebụ ha. Ugbu a isi ọghọm dị n'iji FTP bụ na ọ bụghị usoro nchekwa. Ebugharị data bụ ya mere ezoro ezo.
A na-eziga data niile na ederede doro anya, nke nwere ike ibute nsogbu nchebe. Yabụ, a ga-eji FTP na mgbochi ma ọ bụ naanị na netwọkụ tụkwasịrị obi ma ọ bụ ọ bụrụ na ebufe data adịghị nhịahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe data dị mkpa ka echedoro, a ga-eji usoro mbufe dị nchebe karị.
Nke a bụ ebe SFTP batara. SFTP na-anọchi anya Protocol Transfer Transfer Protocol. Ugbu a, FTP echekwara dị ka FTP, belụsọ na ọ na-agbakwunye nchekwa nke nchekwa.
The data iji Secure FTP n'ezie zoro ezo na urenọ ná Ntụkwasị Obi Shell n'oge nyefe data. Yabụ enweghị ozi ezigara ederede ederede, ihe niile ezoro ezo. FTP echedoro na-akwado ma onye ọrụ ma ihe nkesa ma jiri ọdụ ụgbọ mmiri 22.
Mara kwa na FTP na FTP Secure bụ usoro nkwekọrịta metụtara njikọ nke na-eji TCP maka mbufe faịlụ. Yabụ ị na-ekwe nkwa nnyefe faịlụ. N'ikpeazụ, e nwere TFTP.
TFTP na-anọchite Protocol Transfer Transfer Protocol. Ugbu a, nke a bụ usoro ntụgharị faịlụ dị mfe. Ejighi ya nyefee faịlụ dika FTP na FTP nwere nchekwa na Internetntanetị.
A na-ejikarị ya ebufe faịlụ n'ime netwọk mpaghara. Dịka ọmụmaatụ, a na-ejikarị ya na-agbanye faịlụ nhazi na ihe oyiyi femụwe na ngwaọrụ netwọk dịka firewalls na ndị na-eme njem. Ya mere, TFTP bụ ihe ọtụtụ mmadụ agaghị eji.
N'adịghị ka FTP na FTP echekwara, nke na-eji usoro TCP maka mbufe faịlụ, TFTP bụ usoro njikọ na-enweghị njikọ nke na-eji UDP kama. Na n'ihi na ọ na-eji UDP kama TCP, ọ bụ usoro nnyefe enweghị ntụkwasị obi. Ma ọ bụrụ na ị maghị TCP na UDP, m ga-ejikọ isiokwu m na njedebe nke nkuzi a nke na-akọwa ọdịiche dị n'etiti usoro TCP na UDP.
N'ikpeazụ, TFTP ekwesighi ma ọ nweghị inye nchekwa na njem ebe ọ bụ na, dịka e kwuru na mbụ, a na-eji ya naanị na mpaghara mpaghara ma ọ bụghị n'elu Internetntanetị.
Kedu ebe dị ụtọ n'ịgba ịnyịnya ígwè?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe,ntụpọ dị ụtọỌzụzụ bụ mbọ dị n'etiti 86-95% nke ugbu a Ike Ike (FTP) naigwe kwụ otu ebe. Nwekwara ike chọọ iche maka mbọ ndị a dị ka mbọ nke obere. Mgbalị ndị a siri ike ma chọọ mgbalị na mgbado anya, mana enwere ike ijikwa ogologo oge.Jenụwarị 13. 2021
Ogologo oge ole ka ị ga-agagharị na mpaghara 3?
Mpaghara 3mgbalị na-adị irè karịsịa mgbe ejiri yaogologontachi obi na-agba ịnyịnya. Oge ọrụ nke 10 ruo 30 nkeji na-enye oheregịidowe aburu ibuoke nrụgide na akwara aerobically. Kpoo onwe gi aka iru oru nke elumpagharanwere ike na obi.
Kedu ihe bụ ezigbo FTP ịnyịnya ígwè?
Mkpa ọkụonye na-agba ígwèonye nwere ike wepu ọnụọgụ ọkụ dị elu ga-aga ngwa ngwa. Isiokwu na-azọrọ na a kwesịrị ekwesị kwesịrị ekwesịonye na-agba ígwènwere ike iwepụta ihe dị ka otu narị na iri abụọ na iri atọ ma ọ bụ narị asatọFTP(njirimara ọnụ ụzọ arụ ọrụ) ule, ebe uru na-agbakarị elekere 400 watts.
Ọ kwesịrị mgbe ị ga-agba ọsọ na Mpaghara 3?
Maka ndị na-agba ọsọ, enwechaghị ihe dị mmagịkarịa ngwa ngwaMpaghara2 isina-agba ọsọ. Ndị ọsọ na-adaba na ọnyà nana-agba ọsọike karia mgbe obula g’eduba ya. Otú ọ dị,Mpaghara 3ọrụ dị n'elu ikuku aerobic ma nwee nzaghachi lactate.
Kedu ihe bụ Lance Armstrong's FTP?
Lance Armstrongkwuru na ọ na-enwe ike iwepụta 495 watts maka nkeji 30-40.Ọgọst 7 2020
Kedu ihe bụ pro Faylist?
FTPbu ebumnuche nke Ike Ndabere Oru. Na tiori na nke a bụ ike kachasị ị nwere ike ịkwagide maka ịnya ịnya oge elekere. Ozugbo ị matara nọmba a, a ga-eji ya setịpụ mpaghara ọzụzụ gị ma nyere gị aka ịlele mbọ ị na-agba.Eprel 17 2020
Kedu mpaghara ọzụzụ ọzụzụ kacha mma maka ịgba ịnyịnya?
Ọzụzụ mpaghara 2 bụ ogologo ntachi obi ụbọchị gị. Y’oburu n’inwe igwe ike, nkea bu 59-75 pacenti nke Ike Oru Oru gi (FTP). Mpaghara a bara ezigbo uru maka ọzụzụ gị. Inwe ike ịgba ịnyịnya 2 - 6 awa na mpaghara 2 bụ ihe mbụ na ọzụzụ onye na-eme egwuregwu maka inwe ike ịsọ mpi agbụrụ ma ọ bụ ihe omume nke oge yiri ya.
Need kwesịrị ịma mpaghara ike maka ịgba ígwè?
A gosipụtawo ọzụzụ iji ike ugboro ugboro ka ọ bụrụ ụzọ kachasị dị mma iji melite arụmọrụ ịgba ịnyịnya ígwè gị. Agbanyeghị, iji mee nke ọma, ikwesiri ịmara mpaghara ike gị dị iche iche yana ihe mpaghara ọ bụla pụtara maka ọzụzụ gị. Biko rịba ama na a chọrọ ụdị ngwaọrụ nyocha maka ule a.
Ogologo oge ole ka etiti oge ịgba ígwè na-adịru?
Ma ọ bụ n’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, mmụba n’ọbara (ma si otu a oxygen) obi nwere ike ịmịpịa kwa iti. Oge etiti na mpaghara a ga - adịgide n'etiti 2 ruo 6 nkeji, ọ bụ ezie na ha nwere ike ịdị ogologo oge ma ọ bụrụ na ejiri ike oscillating / kemeghari.